आलमको पक्षमा देउवा: १२ वर्षअघिको घ'टना ल्याएर अहिले प'क्राउ गर्न पाइन्छ ? - Sidha News
आलमको पक्षमा देउवा: १२ वर्षअघिको घ’टना ल्याएर अहिले प’क्राउ गर्न पाइन्छ ?
काठमाडौँ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १२ वर्षअघिको ह’त्या आ’रोपमा प’क्राउ परेका पार्टीका सांसद मोहम्मद अफताब आलमको बचाउ गरेका छन् ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । पुरानो मुद्दा ब्युँताएर आलमलाई प’क्राउ गरिएको भन्दै देउवा सरकारविरु’द्ध आ’क्रामक बनेका हुन् । ‘१२ वर्षअघिको घ’टना ल्याएर अहिले पक्राउ गर्न पाइन्छ ?’ कांग्रेसको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भक्तपुरमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा देउवाले भने, ‘त्यतिबेला के हेरेर बसेको ?’
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले समेत आलमको घटनालाई कांग्रेसवि’रुद्धको ष’ड्य’न्त्रका रूपमा लिए । सञ्चारमाध्यमसमेत कांग्रेसीवि’रुद्ध लागिपरेको उनको आ’रोप थियो । ‘पत्रपत्रिकालगायत सञ्चारमाध्यमसमेत कांग्रेसवि’रुद्ध लागेका छन्, आलमवि’रुद्ध आएको समाचार यसको नमुना हो,’ सिटौलाले भने ।